“Clutch Gamers ကို ဘယျ Esports ပွိုငျပှဲကိုမှ ဝငျပွိုငျခှငျ့ မပေးသငျ့ပါဘူး” – SsaSpartan – Gaming Noodle
“Clutch Gamers ကို ဘယျ Esports ပွိုငျပှဲကိုမှ ဝငျပွိုငျခှငျ့ မပေးသငျ့ပါဘူး” – SsaSpartan
မကွာသေးမီက ကငျြးပခဲ့တဲ့ WePlay! Dota2Tug of War: Mad Moon ပွိုငျပှဲမှာ Aggressive Mode အသငျးခေါငျးဆောငျ SsaSpartan ကို VPEsports က တှဆေုံ့ပွီး အငျတာဗြူးပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အငျတာဗြူးအတှငျးမှာတော့ သူဟာ အရှတေ့ောငျအာရှအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Clutch Gamers အသငျးမှာ ကစားခဲ့ဖူးသူဖွဈပွီး ယငျးအဖှဲ့အစညျးဟာ ကစားသမားမြား ရမယျ့ ဆုကွေးငှတှေကေို လိမျယူသှားခဲ့တဲ့အကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“Clutch Gamers ဟာ မရိုးသားတဲ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈနပေါပွီ။ လူကောငျးတှေ မဟုတျကွတော့ပါဘူး။ Clutch Gamers အဖှဲ့အစညျးကို ဘယျ Esports ပွိုငျပှဲကိုမှ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုသငျ့တော့သလို သူတို့ ဒီလောကထဲကို ပွနျဝငျရောကျလာခဲ့ရငျလညျး ကြှနျတျော့အနနေဲ့ ကနျ့ကှကျဖို့ အဆငျသငျ့ပါ။ ကစားသမားမြား ရမယျ့ ဆုကွေးငှတှေကေို ပရျောဖကျရှငျနယျ မပီသစှာ လိမျလညျသှားခဲ့တဲ့ သူတို့အကွောငျးကို အခုခြိနျထိ Reddit မှာ ရှာဖတျနိုငျပါသေးတယျ။
“သူတို့ ဆုကွေးငှလေိမျတာခံရတဲ့ ကစားသမားတှေ အတျောမြားပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ Gamers Premier Nation Season3ပွိုငျပှဲကို နိုငျတုနျးက ကြှနျတျော Clutch Gamers မှာ ကစားနခေဲ့တာပါ။ ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၅,၄၀၀ ကြျော အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့ အဖှဲ့အစညျးက လိမျသှားပွီး ကစားသမားတှကေို ထုတျမပေးခဲ့ပါဘူး။ တခွားကစားသမားတှကေိုလညျး သူတို့လိမျတာ မခံရစခေငျြပါဘူး” အစရှိသဖွငျ့ SsaSpartan က ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
Gamers Premier Nation Champion Clutch Gamers
ယခုနှဈအစောပိုငျးတုနျးကလညျး ရုရှား Dota2ကစားသမားတဈဦးဖွဈသူ Yol ဟာ ငှကွေေးကိစ်စမြားနဲ့ ပတျသကျလို့ Clutch Gamers အဖှဲ့အစညျးကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရှုံ့ခပြွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ Yol ရဲ့ ပွောဆိုခကျြမြားအရ သူတို့အသငျးဟာ MPGL Asian Championship မှာ ဒုတိယရပွီး ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၂၀,၀၀၀ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့သလို ProDotA Cup SEA 12 မှာလညျး ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၁.၅၀၀ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ယငျးတို့ထဲက သူ့အတှကျ ရသငျ့တဲ့ဆုကွေးငှပေမာဏကို အဖှဲ့အစညျးက လုံးဝထုတျပေးခဲ့ခွငျးမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Yol ရဲ့ လစာအကွှေးစုစုပေါငျး ဒျေါလာ ၅,၀၀၀ ကြျောကိုလညျး မရရှိခဲ့ကွောငျး ဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။ Yol ရသငျ့တဲ့ ငှကွေေးမြား ထုတျပေးဖို့ကိစ်စကို Clutch Gamers ဟာ အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွ ငွငျးဆိုနခေဲ့တာပါ။ ကံဆိုးစှာနဲ့ အလိမျခံခဲ့ရတဲ့ Yol အပါအဝငျ ကစားသမားမြားဘကျမှာ Clutch Gamers နဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာရှကျစာတမျးသကျသအေထောကျအထားမရှိလို့ ဒီငှမြေားကို ပွနျရဖို့တော့ မလှယျကူတော့ပါဘူး။
Clutch Gamers ဟာ မွနျမာ Dota2ကစားသမား InsaNe ကို ၂၀၁၈ ခုနှဈက ချေါယူခဲ့ဖူးတဲ့ အဖှဲ့အစညျးဖွဈပွီး ထိုစဉျက SsaSpartan လညျး အသငျးထဲမှာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဝငျရောကျပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ InsaNe ဟာ ကနျြးမာရေး ကိစ်စမြားကွောငျ့ အမိမွကေို ပွနျလာခဲ့ပွီး Clutch Gamers အသငျးနဲ့အတူ ပွိုငျပှဲဝငျခွငျးမြား မရှိခဲ့ပါဘူး။
WePlay! Tug of War: Mad Moon ပွိုငျပှဲမှာတော့ Aggressive Mode ဟာ အဆငျ့ ၅ နဲ့ ၆ ပူးတှဲနရောကို ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ Esports အသိုငျးအဝိုငျးအပါအဝငျ နယျပယျပေါငျးစုံမှာ ငှကွေေးအရှုပျအထှေးကိစ်စမြားကွုံလာခဲ့ရငျ ဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ ခိုငျမာတဲ့စာရှကျစာတမျးမြား ကွိုတငျပွုလုပျထားသငျ့ကွောငျး ဒီအဖွဈအပကျြလေးက သကျသပွေလကျြရှိပါတော့တယျ။ Esports အကွောငျးအရာမြားနဲ့ သတငျးမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျ တငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။
Photos Credit: CG & Wyk
“Clutch Gamers ကို ဘယ် Esports ပြိုင်ပွဲကိုမှ ဝင်ပြိုင်ခွင့် မပေးသင့်ပါဘူး” – SsaSpartan
မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ WePlay! Dota2Tug of War: Mad Moon ပြိုင်ပွဲမှာ Aggressive Mode အသင်းခေါင်းဆောင် SsaSpartan ကို VPEsports က တွေ့ဆုံပြီး အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာဗျူးအတွင်းမှာတော့ သူဟာ အရှေ့တောင်အာရှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Clutch Gamers အသင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ယင်းအဖွဲ့အစည်းဟာ ကစားသမားများ ရမယ့် ဆုကြေးငွေတွေကို လိမ်ယူသွားခဲ့တဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“Clutch Gamers ဟာ မရိုးသားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ လူကောင်းတွေ မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ Clutch Gamers အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ် Esports ပြိုင်ပွဲကိုမှ ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသင့်တော့သလို သူတို့ ဒီလောကထဲကို ပြန်ဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကန့်ကွက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ ကစားသမားများ ရမယ့် ဆုကြေးငွေတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မပီသစွာ လိမ်လည်သွားခဲ့တဲ့ သူတို့အကြောင်းကို အခုချိန်ထိ Reddit မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
“သူတို့ ဆုကြေးငွေလိမ်တာခံရတဲ့ ကစားသမားတွေ အတော်များပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ Gamers Premier Nation Season3ပြိုင်ပွဲကို နိုင်တုန်းက ကျွန်တော် Clutch Gamers မှာ ကစားနေခဲ့တာပါ။ ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၅,၄၀၀ ကျော် အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် အဖွဲ့အစည်းက လိမ်သွားပြီး ကစားသမားတွေကို ထုတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ တခြားကစားသမားတွေကိုလည်း သူတို့လိမ်တာ မခံရစေချင်ပါဘူး” အစရှိသဖြင့် SsaSpartan က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်း ရုရှား Dota2ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ Yol ဟာ ငွေကြေးကိစ္စများနဲ့ ပတ်သက်လို့ Clutch Gamers အဖွဲ့အစည်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Yol ရဲ့ ပြောဆိုချက်များအရ သူတို့အသင်းဟာ MPGL Asian Championship မှာ ဒုတိယရပြီး ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သလို ProDotA Cup SEA 12 မှာလည်း ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၁.၅၀၀ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ယင်းတို့ထဲက သူ့အတွက် ရသင့်တဲ့ဆုကြေးငွေပမာဏကို အဖွဲ့အစည်းက လုံးဝထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Yol ရဲ့ လစာအကြွေးစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း မရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Yol ရသင့်တဲ့ ငွေကြေးများ ထုတ်ပေးဖို့ကိစ္စကို Clutch Gamers ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ငြင်းဆိုနေခဲ့တာပါ။ ကံဆိုးစွာနဲ့ အလိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ Yol အပါအဝင် ကစားသမားများဘက်မှာ Clutch Gamers နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းသက်သေအထောက်အထားမရှိလို့ ဒီငွေများကို ပြန်ရဖို့တော့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။
Clutch Gamers ဟာ မြန်မာ Dota2ကစားသမား InsaNe ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ခေါ်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်က SsaSpartan လည်း အသင်းထဲမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝင်ရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ InsaNe ဟာ ကျန်းမာရေး ကိစ္စများကြောင့် အမိမြေကို ပြန်လာခဲ့ပြီး Clutch Gamers အသင်းနဲ့အတူ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းများ မရှိခဲ့ပါဘူး။
WePlay! Tug of War: Mad Moon ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Aggressive Mode ဟာ အဆင့် ၅ နဲ့ ၆ ပူးတွဲနေရာကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Esports အသိုင်းအဝိုင်းအပါအဝင် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာ ငွေကြေးအရှုပ်အထွေးကိစ္စများကြုံလာခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသင့်ကြောင်း ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက သက်သေပြလျက်ရှိပါတော့တယ်။ Esports အကြောင်းအရာများနဲ့ သတင်းများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။